Adreesị email na-akpaghị aka na Efdị Mma | Martech Zone
O nwere ike ịbụ na ị chọpụtala na anyị nwere mmemme mmiri ọkụ na inbound marketing ị nwere ike ịdebanye aha na saịtị anyị (chọọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ). Nsonaazụ nke mgbasa ozi ahịa email a na-akpaghị aka bụ ihe ịtụnanya - karịa ndị debanyere aha 3,000 abanyela na ndị na-edeghị aha. Anyị enweghị ọbụna ịtụgharị ozi ịntanetị na email HTML mara mma ma (ọ dị na ndepụta nke ihe ị ga-eme). Email na-akpaghị aka bụ n'ezie ntụzi nke anyị chọrọ ịnọgide na-aga. Anyị agaghị ahapụ kwa ụbọchị na kwa izu akwukwo ozi ahia, ma ịnwe nhọrọ ndị ọzọ ahaziri iche maka ndị na-agụ akwụkwọ anyị ịmaba na otu isiokwu bụ nnukwu ụzọ anyị chọrọ inyochakwu.
Email marketing bụ nna ukwu nke mmalite. Ebe ozo oge ochie a na-ahapụ usoro ịzụ ahịa n'azụ, mgbanwe email, mgbanwe, na ike gafere. N'afọ gara aga, nzaghachi email bụ nnukwu ihe. Ndị ọrụ na-abanye na ịntanetị nke ọma, na iji bụrụ ndị ahịa email dị mkpa ga-anabata ozi na ngwaọrụ niile. Ozi ịntanetị ekwesịghị ugbu a ọ bụghị naanị na ọ na-anabata, ha kwesịrị ịbụ ndị ezubere iche, n'oge, na nke ahaziri iche. Adi Toal, Onye nrụnye
Ulo oru nke na-eji akpaaka ahia iji zụlite atụmanya na-enweta mmụba nke 451% na ndu ruru eru. Nke ahụ bụ ọnụ ọgụgụ buru ibu - na Instiller etinyela ọnụ ihe omuma a nke ahụ na-enye ihe akaebe na akpaaka email na-emetụta ma ahịa ahịa B2C na B2B.
N'ezie, email akpaaka abụghị naanị opt-in ntapu mkpọsa dị ka anyị nwere. Ọ gụnyekwara nzaghachi akpaaka nke mere ka ozi ịntanetị na-akpalite na-akpalite na-akpalite mgbe onye na-edebanye aha mere ihe. Ozi ozi email na-akpata pasent 70.5% dị elu karịa na ọnụego 152% dị elu karịa azụmahịa dị ka ọ dị na mbụ ozi ahia. N'ihi gịnị? Usoro iheomume na ahaziri onwe ha na-eme ka ozi ịntanetị ndị a bụrụ ozi kachasị mkpa ị nwere ike ibido na akpaghị aka.
Instiller ewulitela ihe ngwọta akpaaka email nke na-enye ngwaọrụ niile dị mkpa maka ụlọ ọrụ iji nyefee ndị ahịa ahịa ọrụ email zuru oke. Okpokoro akpaaka na-agbanwe agbanwe, ihe ịtụnanya, mmemme nnabata, ozi ịntanetị ụbọchị ọmụmụ, nkwenye ntinye akwụkwọ, usoro nzụlite na ọdịnaya dị ike bụcha atụmatụ nke ikpo okwu ha - na-egosi na ịdị adị nke akpaaka email site na ozi ha!
Tags: adi toalemail gị n'ụlọngaarụmọrụ akpaakandị na-eme yaụbọchị ọmụmụ emailntinye akwụkwọ ntinye akwụkwọntapu mkpọsaarụmọrụ akpaaka na-agbanwe agbanweike ọdịnayaakpaaka emailemail akpaaka workflowemail maka ụlọ ọrụemail nkeonweemail ogeihe ndoziakụrụngwa ahịazụọ mkpọsaịzụlite usorokpaliri emailịnabata ozi ịntanetị